ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်ရန် လေ့လာ | ဧရာဝတီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်ရန် လေ့လာ
ဇွဲထက်| December 17, 2012 | Hits:3,660
6 | | ယနေ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် လူနာတဦးကို ကြည့်ရှုအားပေးနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – ဇွဲထက် / ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အတွက် ဒေါ်အောင်စုဆန်းကြည် အပါအ၀င် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာ ရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ပညာရှင်များ၊ ပါမောက္ခများသည် ယနေ့နံနက်က ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်သည့် ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီဖွဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီဆေးရုံကြီး မွမ်းမံဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ လာဆွေးနွေးတာ။ ဆေးရုံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်အတွက်
သူနာပြုတွေ ဆရာဝန်တွေ လုံလောက်မှုရှိမရှိ ဆွေးနွေးပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးကိစ္စတွေ၊ လူနာနဲ့ ခုတင်နဲ့ မျှမမျှ ဒီနေ့တော့ အရှိအတိုင်း တွေ့သွားတာပေါ့”ဟု ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ကျော်မြင့်က ပြော
ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး၏ လတ်တလော အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် များ နှင့် ပညာရှင် ပါမောက္ခကြီးများက လူနာများနှင့် ဆေးရုံတာဝန်ကျ ဆရာဝန်များ၊ အလုပ်သင် ဆရာဝန်များကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းကြသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဆေးကုသဆောင် ၉-၁၀ တွင် တာဝန်ကျနေသည့် ဆရာဝန်မ တဦး က“ဆေးရုံကြီးက လိုအပ်နေတဲ့ ဟာတွေကို ပြန်ပြီးတော့ ပြုပြင်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲ။ အခုဆိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပံ့ပိုးပေးထားတာ နည်းနေသေး တယ်။ လူနတွေအတွက်ကိုပံ့ပိုးပေးထားတာနည်းနေသေးတယ်။ အရေးပေါ်ဘက်ကို သွားကြည့်သင့်တယ်။ ဆေးရုံကြီးက ဒီထက် ဒီထက် အများကြီး လိုအပ်နေသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရင် ကောင်းမှာပေါ့”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆရာဝန်များ အနေနှင့် ငွေရှာခြင်းထက် စေတနာ ပိုထားရန် ပြောကြားသည်။
လုပ်သက် ၃၇ နှစ်ရှိ စစ္စတာ ဒေါ်တင်ဝင်းရွှေကလည်း“သန့်ရှင်းရေးကို အနိုင်အနင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ လုပ်တယ်။ များပြားလာတဲ့ လူနာဦးရေနဲ့ သူ့ရဲ့အနောက်မှာ ပါလာတဲ့ လူနာရှင်များ အတွက် အားလုံးက အရင်တုန်းကထက် ၂ဆ ၃ဆ လောက် ဖြစ်လာ တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ၀န်ထမ်းအင်အားနည်းတဲ့ အခါမှာ အားနည်းချက်လေးတွေ ရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကလည်း သန့်ရှင်းရေးအပိုင်းများ စောင့်ကြည့်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့သည် လူနာများကိုလည်း ကြည့်ရှု အားပေး သွားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်၍ မုံရွာ လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသ မှ လာရောက် ဆေးကုသမှု ခံယူနေသော ကလေး ၄ ဦးကို ကြည့်ရှုအားပေးမှု ပြုလုပ်သေးသည်။
နိုင်/ ကျဉ်း ကျောင်းသားဟောင်းများ Day ပြန်တက်ခွင့်ရရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကူမည်
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Kyaw Nyunt December 18, 2012 - 8:05 am	I am very interested that Daw AS Su Kyi had visited Yangon General Hospital (RGH) to assess the needs for improvement. The RGH was built in the early 20th century and is now nearly 100 yrs old.
This is the hospital where I spent my undergraduate years in the early 70s. The hospital is now quite old and is not suitable for the medical services of the 21st centuary. Instead of refurbishing this hospital the concerned authorities should deeply consider redevelopment ie. rebuildinganew YGH. A modern 1500 bedded hospital can be built onasmaller footprint than the present YGH.
In Hong Kong where I practise , the HK government has built nine regional hospitals of these size forapopulation of7million. The government of Myanmar should seriously consider to rebuild YGH to improve the healthcare and to provideatraining hospital of international standards.
Reply	ng3 December 18, 2012 - 1:30 pm	need to build another hospital…she know it.we know it but never never….
Reply	nyein nyein san , shwetaung oo pagoda,monywa December 18, 2012 - 3:54 pm	very good visit !